Olo-masina – 2trondro
Home / Fiangonana / Olo-masina
"Hianareo efa tonga eto an-tendrombohitra Ziona sy any an-tanànan 'ilay Andriamanitra velona, ny any an-danitra i Jerosalema, ary ny anjely tsy hita isa amin'ny fety fanangonana, ary ny fiangonana, dia ny lahimatoa izay voasoratra any an-danitra, ary ny mpitsara, izay no Andriamanitry ny rehetra, ary amin'ny fanahin'ny olona marina izay efa natao tanteraka, sy amin'i Jesosy, ilay mpanalalan 'ny fanekempihavanana vaovao " (Hebreo 12:22-24).
"Misaora amin'ny Ray, Izay mendrika antsika anjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava " (Colossians 1:12).
Fa ny Kristianina, ny finoana dia tsy ho manirery asa, fa ny fianakaviana iray raharaha. Na dia nanana ny Fiangonana mahatonga antsika mpikambana ao amin'ny fianakaviana izay miitatra be mihoatra noho ny toerana sy ny fotoana, anisan'izany ny tsy mpino eto an-tany, fa koa ny anjely sy ny Olomasina any an-danitra, ary ny Fanahy fanahy ao amin'ny afofandiovana, iza no hiditra any an-danitra indray andro koa.
Katolika-Kristianina, indrindra fa manaja ny anjely sy ny Olomasina. Zava-dehibe ny hanazava fa tsy Katolika fanompoam-pivavahana azy ireo, na izany aza. Katolika hivavaka amin'Andriamanitra irery ihany! Mivavaka amin'ny anjely sy ny Olomasina, ankapobeny mangataka azy ireo mba hivavaka ho anay. Sady koa anie, raha isika ao amin'ny zatra mangataka ireo eto an-tany mba hivavaka ho antsika, nahoana isika no tsy mangataka ireo izay any an-danitra mba hanao toy izany koa? Raha izahay koa, mazava ho azy, ho any amin'Andriamanitra Raintsika mivantana amin'ny alalan'ny vavaka, dia tsy mandeha ho azy irery ihany. Miaraka foana isika amin'ny alalan'ny vavaka avy amin'ny Virjiny Mary, ny Reny ao amin'i Kristy, ary ny Olomasina, ny rahalahy sy anabavy.
Ao amin'ny Baiboly, hitantsika ny Olomasina any an-danitra mivavaka ho antsika (cf. Rev. 5:8; 6:10). Ny teny hoe "olo-masina,"Izay midika hoe" masina iray,"Dia indraindray ampiasaina ho an'ny mpino eto an-tany ihany koa, na dia tsy lavorary ihany amin'ny fomba. Ny Apôstôly Paoly, ohatra, miteny ny taratasy ho an 'ireo "izay olona voantso sady masina" (Rom. 1:7), nefa tamin'izany andro izany Mampirisika azy ireo tsy hanao fahotana (cf. Rom. 6:1 FF.). Mazava ho azy, fa ny mpino eto an-tany mbola mitolona mba ho afaka ota dia midika hoe isika ihany no olo-masina tamin'ny kely "s"–olo-masina ao amin'ny fanaovana. Izahay tsy mbola tonga ny tonga lafatra ny fahamasinana haavon'ny ireo any an-danitra tia.
Avy ny amin'ny fitiavany lehibe ho antsika, Andriamanitra dia miantso ny zanany ho avy ho velona sy ho faly miaraka Aminy any an-danitra! Ianao, koa, voantso ho indray andro any ho Saint. Ahoana no azo atao? Mety hanontany ianao. Ho tonga Saint Toy izany koa fa Maria, Joseph, Peter, Paul, John, Patrick, Francis, Catherine, Teresa, ary Alphonsus nanao: noho ny fahasoavan'Andriamanitra Tsitoha Andriamanitra no miasa eo amin'ny fiainanao. voalohany indrindra, isika mandray ny fahasoavana amin'ny alalan'ny Batemy sy ny hafa sakramentan'ny (cf. John 3:5; 6:54; 20:23, et al.). Koa izahay mandray fahasoavana amin'ny alalan'ny vavaka, Famakiana soratra masina, ary amin'ny alalan'ny fizarana ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny hafa
(cf. 2 Tim. 3:16; azy ireo. 2:24). Grace tonga ho antsika maimaimpoana ny fahafatesana sy ny fitsanganana amin'ny maty ny an'i Jesosy Kristy Tompontsika. Tsarovy mandrakariva ny teniny ho antsika, "Izaho no voaloboka, ianareo no sampany. Izay mitoetra ao amiko, ary Izaho kosa ao aminy, dia izy no mamoa be, fa raha misaraka amiko kosa ianareo, dia afaka manao na inona na inona " (John 15:5).